Adeegga Xallinta Boosta Shiinaha iyo wakiilka | Sunson
Xalka rarida boostada
Runtii waan fahamsanahay xalka boostada had iyo jeer waa ikhtiyaarka hore ee ganacsiga e-commerce maadaama ay ku raaxeysato sicirka hoose. Si loo qanciyo baahida ganacsatada kala duwan, waxaan la shaqeyneynaa xafiisyo badan oo boostada ah sanadaha soo socda waxaanna sii wadnaa ka takhalusida adeegga xun mararka qaarkood. Hada inta soo hartay waa kuwa ugu fiican.
Shiinaha Post wuxuu u qaybsan yahay dusha sare iyo baakado diiwaangashan. Waa adeeg caalami ah oo loogu talagalay xirmooyinka miisaankoodu ka hooseeyo 2KG. Shiinaha Post iyo Universal Postal Union waxay soo saareen kanaal caalami ah oo boostada wax ku gaarsiin kara xarumaha kala duwan ee boostada in ka badan 200 oo dal iyo gobollada adduunka. Faa'iidooyinka adeegga boostada Shiinaha: mid dhaqaale iyo mid la awoodi karo, gaadhitaan caalami ah, nadiifinta caadooyinka habboon, nabadgelyada iyo xasilloonida.
Xirmooyinka boostada ee Belgium waxaa loo qaybiyaa baakadh Belgil ah iyo xirmooyinka caalamiga ah ee Belgium, kuwaas oo loogu talagalay xirmooyinka caalamiga ah ee culeyskoodu ka yar yahay 2KG. Baakistaha Biljimka ah ee Belc waxaa loo diri karaa in ka badan 20 waddan oo ku yaal Yurub, Belgil-da adduunka oo dhanna waxaa loo diri karaa in ka badan 200 oo dal oo adduunka ah, Macluumaadka raad-raaca waa la weydiin karaa, Faa'iidooyinka adeegga boostada ee Beljamka: nadiifinta caadooyinka mideysan ee Boqortooyada Ingiriiska, maya Transit-ka labaad ee wadamada yurub, waxaa lagaa qaadayaa kiilo kiilo, oo ku haboon baakadaha yar yar iyo kan yar, oo loo aqbali karo baytariyada ku jira / badeecooyinka taageera batari, waana adeega la doorbido ee gaarsiinta qarashka yar ee yurub
Kanaalka 'Postnl' ee yar wuxuu ka kooban yahay adeegga xawaaladda Yurub si gaar ah loogu furay iibiyeyaasha ganacsiga e-ganacsiga ee xudduudaha ka gudba, oo xaruntoodu tahay Nederland, isagoo sii wadaya waddammada Yurub oo dhan, kuna tiirsan shabakadda boostada ee Dutch iyo nidaamka nadiifinta caadooyinka oo hufan, si loo abuuro gobol heer sare ah Adeegyada kala duwan, Faa'iidooyinka adeegga boostada Nederlandka: qiimaha la doorbido, waqtiga oo deggan, ku habboon baakadaha fudud iyo kuwa yaryar, waxayna aqbali karaan alaabada leh baytariyada ku jira.
Swiss Post waxay u qaybsan tahay baakadda dusha sare iyo kanaallada diiwaangashan. Waa adeegga ugu sarreeya ee boostada 5 ee UPU waana hay'adda ugu horumarsan Yurub. Waxay ku leedahay laamo ku dhowaad waddan kasta waxayna leedahay awoodo farsamo oo xoog leh. Faa'iidooyinka adeegga: nadiifinta caadooyinka habboon, waqtiga joogtada ah, faa'iidooyinka dhaqaale, oo ku habboon iftiinka iyo baakadaha yar yar ee ku jira 2KG.